निन्द्रा नलागे के गर्ने ? — Bhaktapurpost.com
निन्द्रा नलागे के गर्ने ?
धेरै मानिसले नियमित सपना देख्ने गर्छन् । सपना पनि फरक–फरक प्रकृतिका हुन्छन् । कहिले रोमान्टिक सपना देखिन्छ त कहिले डरलाग्दो । तर, यस्ता सपनाबारे समाजमा अनेक भ्रम छन् । सपनालाई नै आधार बनाएर भविष्यवाणीसमेत गरिन्छ । सपनाबाट सुखद वा दुःखद दिन भनेरसम्म किटान गरिन्छ । उसो भए किन देखिन्छ त फरक–फरक सपना ? मनोविद् गोपाल ढकालले बताएका छन् :
सार्वजनिक यातायातको भाडादर घट्यो